Chatroulette – nkonzo ibonelela wena kunye intloko ukuba intloko jikelele pair ukusuka jikelele ehlabathini ngokusekelwe webcam kwaye microwave. Ungakwazi thetha, uhlobo okanye nje kunyikima izandla ukuba ubuso share yakho unye. Chatroulette yi free software yekhompyutha ukusuka Kwelinye subcategory, inxalenye yomsebenzi Womnatha kwi-Intanethi udidi. I-app ngoku efumaneka ngesingesi kwaye kwaba uhlaziyo lokugqibela njalo. Chatroulette (uguqulelo) iyafumaneka ukuze ukukhuphela ulwazi oluvela iwebsite yethu.
Kude kube ngoku inkqubo waba layishela phantsi egronjiweyo phinda-phinda. Thina sele ukhangele ukuba ulayisho ikhonkco akhuseleke, nangona kunjalo kuba eyakho umyalelo wokhuselo sicebisa ukuba ngaba uvavanyo – layishela phantsi egronjiweyo software neqabane lakho antivirus. Apha uyakwazi ukufumana i-tshintsha ka-Chatroulette oko kwaba ibonise kwi kwiwebhusayithi yethu ethi njalo.
Uguqulelo oludlulileyo, kwaye kwaba igqityiwe kwi thambileyo-njalo
Bona ngezantsi utshintsho ngamnye inguqulelo: Yovavanyo lwe-Loluntu wambetha kum umdlalo indlela, ubuso-intanethi imathematika quiz mngeni. Signup nge yakho Facebook-akhawunti umngeni abahlobo bakho okanye ukwenza jikelele mngeni kunye abantu jikelele ehlabathini Khetha i amanqaku Share. Ngonaphakade bazive ngathi loluntu media kwaye dating Apps kuba atshabalalisa unguye lwengxoxo. Ubuso ikuvumela ukuba enze onesiphumo unxulumano kwaye kusibuyisa kwi okhawulezayo, real-ubomi intlanganiso kwi-ethambileyo sicwangciso senkqubo. Ividiyo Incoko kuba ChatRoulette kuvumela ukuba ahlangane jikelele abantu intuthuzelo yakho ekhaya kwi yefowuni yakho kakhulu addictive.
ndinomsebenzi omkhulu incoko kunye a stranger kwelinye icala lehlabathi
← Dating kwi-china
Guys ikhangela Girls kwi-China, Bahlangana China Guys →